Date My Pet » Iza no Tokony Handoa amin'ny Date Voalohany – Torohevitra Men
Last nohavaozina: Jul. 06 2020 | 3 min namaky
Olona isan-karazany ny ahantòny amin'io-dehibe raha ny amin'ny mampiaraka, ary angamba iray amin'ireo fahita indrindra no mahatsiaro ho miady saina na ratsy momba ny fandoavana ny daty. Ny olona mamaly amin'ny fomba hafa izany adin-tsaina. Ny olona sasany vola foana, nefa tamin'ny mangingina ihany mahatsapa ratsy ao whilst nanoratra ny maso. Ny olona sasany misisika ny fandoavana ny antsasaky ny olona tsirairay ary ny sasany dia tezitra tsotra momba izany. Ny olona sasany dia tena matahotra fotsiny ny toa efa lany andro raha toa ka manolotra ny handoa ny volavolan-dalàna.
Fantatro ny olona izay fisaka vao avy tsy mety mandoa tanteraka amin'ny daty voalohany, fa nanizingizina fa ny volavolan-dalàna tokony ho nampitresaka tsara amin'ny tapany. Nahoana? Satria nanana zavatra maro ny fandoavana ny daty lafo vidy amin'ny vehivavy ihany no mba tsy hihaino azy intsony. Angamba efa nahazo hitranga aminao izany. Angamba dia ny vehivavy no tia ka nieritreritra ianao vibing amin'ny, mba nilaza ny handoa, afa-tsy manana azy, ary tsy ritra ny antso hiverina. Na angamba efa nandoa mediocre maromaro na darned mahatsiravina daty marina ary faly noho izany. Lany mafy rehetra nahazo vola-. Ary mahazo fa tena hanao. Iza no tsy mahatsapa mafy!
Amin'izao fotoana ny fitoviana nahoana no misy olona tsy ampoizina hatrany am-paladia ny vola lany rehetra ny volavolan-dalàna tsotra izao fotsiny izy satria ny olona? Women te fitoviana, tsara eto dia.
Aleo hotantaraiko aminareo kely miafina. Raha izany no anao, ary ianao manizingizina azy mandoa ny antsasaky ny daty voalohany, izany izy dia hanaitaitra misy vehivavy tsara toetra iombonana. Izao ahitanareo Ahy vehivavy mampianatra ny mpanjifa mba ho eo amin'ny teny manodidina ny olona ny heriny izy ireo mampiaraka, dia manao tsara kokoa izany. Izany dia midika hoe fandraisana hahafinaritra ary mamela ny olona ho pitiavana azy. Tsy afaka ny ho izy roa ao amin'ny teny hery, raha tsy izany dia tsy afaka hiroborobo olon-tiany. Dia ho bebe kokoa ny tsara indrindra miaraka vady, izay mazava ho azy fa handoa ny antsasaky ny volavolan-dalàna. Ka raha mbola mahatakatra ny fahasorenana, Mamporisika hatrany aho mba hanao zavatra ny hatsaram-panahy sy ny fanatitra hohanina handoa. Ny vehivavy tsara dia tena hankasitraka anao noho izany.
Ary aza manao izany ihany ny vehivavy tianao. Manolotra ny handoa ny teny rehetra daty. Ankoatra ny zava-misy fa izany no tsara endrika fotsiny mampino sy ny fahalalam-pomba, izao rehetra izao, ary ianao no mijery manao asa tsara. Dia Voamariky.
Indray mandeha aho amin'ny daty izay tena tsara handeha. Na izany aza amin'ny farany, raha ny marina ny bandy nitondra nivoaka ny fanaovana kajy mba nisara-tsara ny volavolan-dalàna araka izay nanana izay mba mihinana sy misotro (Mihevitra aho fa tsara ny fanaovana kajy tamin'ny finday, fa mbola). Raha vao nitranga izany dia nahatsapa ny fifanintonana rehetra teo aloha aho dia mahatsapa tsara avy tatatra ahy. WOW! Azoko an-tsaina mihitsy hoe amin'ny olona toy izany – Raha toy izao no sary an-tsaina izao izay ho toy ny miara-miaina amin'ny! Azonao sary an-tsaina miantsena any Ikea ny fanaka? Ahoana ny amin'ny ny tsingerintaona nahaterahany, dia tsy maintsy mandoa ny antsasaky dia koa? Tsy dia tantaram-pitiavana.
Tsy ho jaded ny fandoavana amin'ny alalan'ny falifaly fotsiny momba izany. Ao ny mikitoantoana sy nianjera ny mampiaraka, ny vehivavy sasany alainao avy HO hanjavona fa tsy hiverina ny antso. Feh izany ny Mazava ho azy fa. Sahiko ny miloka nataonao toy izany koa ny olona any amin'ny toerana nanaraka ny tsipika raha tamin-kerisetra marin-toetra amin'ny tenanao. Na izany aza, raha ny vehivavy no avy miaraka, ka ianareo mampitsahatra azy hahatsapa manokana ary mamorona fitiavana satria efa nanolo-tena vola, Tsy izany ihany no lalana fivoahana ny manintona, fa izy no hahafantatra anao noho ny mahery, Anarana iombonana amin'ny olona ianao.
Noho izany dia hoe aza manahy momba ny efa lany andro - aoka ny hiandany amin'ny herim-po, olon-tiany sy ny fitiavany. Nahoana no tsy mipetraka ary hankafy ny fahafinaretana dia afaka mitondra ny vehivavy raha manao izany zavatra izany ho an'ny tsara fanahy, ianao na mikasa ny hahita azy indray na tsia. Afaka dia bask amin'ny fahalalana fa tsara ianao, fampandehanana ary mahaleo tena tanteraka ny olona, izay afaka misafidy ny hitsaboana ny vehivavy, fotsiny satria afaka. Mahatsiaro mirehareha.